२०७४ भदौ १५ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
चिकित्सक सङ्घको आन्दोलन स्थगित
प्रस, वीरगंज, १४ भदौ/ नेपाल चिकित्सक सङ्घ नारायणी वीरगंजले आन्दोलन एक साताको लागि स्थगित गरेको छ । सहायक प्रजिअ दुर्गादत्त पौडेल सम्मिलित सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकले डा. सञ्जय अग्रवालमाथि भदौ १० गते हातपात गरेका वीरगंज महानगर–१५ लक्ष्मनवा निवासी बैजु झा र सुभाष झाविरुद्ध भदौ १३ गते मङ्गलवार केही सार्वजनिक मुद्दा दर्ता भइसकेकोले सङ्घलाई आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेअनुरूप सङ्घको बुधवार बसेको बैठकले एक साताको लागि आन्दोलन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घको बैठकले कसूरवारमाथि मुद्दा दर्ता भएको र स्थानीय प्रशासनले कसूरवारलाई पक्राउ गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेकोले आजदेखि शुरू गरिएको आन्दोलन २४ घण्टापछि स्थगित हुने जनाएको छ । चिकित्सक सङ्घको आह्वानमा आज वीरगंजका सम्पूर्ण अस्पताल, नर्सिङ होम बन्द रहे । नाउक्षे अस्पतालको आकस्मिक कक्ष मात्र सुचारु थियो । स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएपछि बिरामीहरूलाई मर्का परेको थियो । चिकित्सक सङ्घले एक साताभित्र अभियुक्तहरूलाई पक्राउ नगरे पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
पर्सामा राजपाको क्रेज बढ्दो, टिकटका लागि होटल घेराउ
प्रस, परवानीपुर, १४ भदौ/ पछिल्लो समयमा असोज २ गते प्रदेश नं. २ का ८ जिल्लामा स्थानीय तहको चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सहभागी हुने सहमति जनाएपछि प्रदेश नं. २ को चुनावमा रौनक छाएको छ । चुनावमा भाग लिने निर्णयसँगै सबैभन्दा बढी विवाद राजपाभित्रै देखिएको छ । यसलाई राजपाको जनता माझ रहेको लोकप्रियतालाई दर्शाएको राजपाका नेताहरू बताउँछन् । राजपाका नेता शशिकपूर मियाँका अनुसार टिकटको लागि शक्ति प्रदर्शन असल संस्कार भएका कार्यकर्ताहरूको पार्टीलाई जनाउँछ । गत शनिवार राजपा पर्सामा टिकटको बारेमा परामर्श तथा निर्णयमा सघाउन आएका पर्यवेक्षक विजय गुप्तालाई पनि असहज परिस्थिति सामना गर्नुप¥यो । पार्टीले डाँकेको बैठकको दौरान वीरगंजबाट मेयरका आकाङ्क्षी विमलप्रसाद श्रीवास्तव र राजेशमान सिंह पक्षका समर्थकहरूले शक्ति प्रदर्शन गरी नगरपरिक्रमासमेत गरेका थिए । उक्त दिन दुवै खेमाबीच झडप हुने अवस्था पनि उत्पन्न भएर टिकटको निर्णय गर्न बसेको बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो । त्यस्तै अवस्था आज बुधवार राति पनि वीरगंजमा सृजना भएको छ । साँझ ६ बजेदेखि होटल सम्झनामा बैठक चलिरहँदा राति ११ बजेसम्म राजपाका कार्
फोरम नेपालद्वारा प्रदेश नं. २ को ६ जिल्लामा उम्मेदवारहरू सार्वजनिक, ६ जिल्लामा ३६ जना ‘यादव’ उम्मेदवार
राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, १४ भदौ/ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले दुई नम्बर प्रदेशमा असोज दुई गते हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि ८ जिल्लामध्ये ६ जिल्लामा करिब ९० प्रतिशत उम्मेदवार घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहको नगरपालिका र गाउँपालिकाको लागि सो पार्टीले मङ्गलवार अबेर राति ६ जिल्लाका उम्मदेवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंमा हिजो बसेको कार्यसम्पादन समितिले उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । फोरम नेपालले सर्लाही, महोत्तरीबाहेक पर्सा, बारा, रौतहट, धनुषा, सिरहा र सप्तरी गरी ६ जिल्लाका उम्मेदवारहरू नामावली सार्वजनिक गरेको छ । फोरमले ६ जिल्लाको ६४ वटा नगरपालिका र गाउँपालिकाको चुनावमा ३६ जना महिला/पुरुष गरी यादव उम्मेदवारलाई टिकट दिएको देखिन्छ । जसमा सबैभन्दा बढी सिरहामा १२, सप्तरीमा १०, रौतहतमा ७, बारामा ३ तथा पर्सा र धनुषामा २/२ जना गरी कुल ३६ जना महिला/पुरुष यादवलाई टिकट दिइएको देखिन्छ । त्यसैगरी, ८ जना मुस्लिम उम्मेदवारलाई फोरमले टिकट दिएको छ । रौतहटमा प्रदेश नं. २ कै सबैभन्दा बढी नगरपालिका रहेको देखिन्छ । रौतहटमा ११ वटा नगरपालिका
फोरमको पर्सा–बाराका उम्मेदवार छनोट
प्रस, वीरगंज, १४ भदौ/ सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल पसाले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उम्मेदवार छनोट गरेको छ । एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका, दश गाउँपालिका गरी १४ वटा स्थानीय तहमध्ये ९ वटा स्थानीय तहमा उम्मेदवार चयन गरेको छ । ५ वटा स्थानीय निकायमा विवाद देखिएकोले उम्मेदवारको छनोट केही दिनमैं पूरा गर्ने समाचारमा जनाइएको छ । वीरगंज महानगरपालिकाको मेयरमा विजय सरावगी, उपमेयरमा पिङ्कीदेवी यादव, पोखरिया नगरपालिकाको मेयरमा एमालेबाट पहिलो संविधानसभामा निर्वाचित सभासद् प्रद्युमन चौहान उम्मेदवार भएका छन् भने उपमेयरमा सलमा खातुन, बहुदरामाई नगरपालिकाको मेयरमा पन्नालाल साह, छिपहरमाई गाउँपालिकाको अध्यक्ष्Fमा इन्द्रासन कलवार, उपाध्यक्ष्Fमा किचकली देवी, धोबिनी गाउँपालिकाको अध्यक्ष्Fमा सुशीलादेवी चौहान, उपाध्यक्षमा पारसप्रसाद पटेल, जगरनाथपुर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कृष्णमोहनप्रसाद यादव, उपाध्यक्ष्Fमा बिसमिल्लाह खातुन, पकहामाई गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विजय चौरसिया, उपाध्यक्ष्Fमा कुष्मी देवी, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा प्रदीप जैसवाल, उपाध्यक्षमा पूmलमतिकुमारी थरुइन उम्मेदवार भएका छन् ।
बाढीग्रस्त क्षेत्रमा भाइरल ज्वरोको सङ्क्रमण
प्रस, वीरगंज, १४ भदौ/ पर्सामा भाइरल ज्वरोको प्रकोप बढेको छ । बाढीपछि भाइरल ज्वरोको प्रकोप बाढीग्रस्त क्षेत्रमा देखा परेको हो । लङ्गडी, जानकीटोला, मुडली, पोखरिया, बसन्तपुर, मिर्जापुर, धोबिनी, हरिहरपुर, सम्भौतालगायतका गाउँहरूमा भाइरल ज्वरोका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । लङ्गडी स्वास्थ्य चौकीमा मात्र दैनिक १५ जना भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू आउने गरेका इन्चार्ज चन्दन साहले बताए । पोखरिया अस्पतालमा पनि भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू ठूलो सङ्ख्यामा आउने गरेका छन् । अहेब बृजेश द्विवेदीले दैनिक ३५ जनासम्म भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू आउने गरेको बताए । बाढीको कारण जमीनमुनिको पानी दूषित भएको र मौसममा पनि परिवर्तन भइरहेको कारण भाइरल ज्वरोका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको चिकित्सकहरूले बताए । चिकित्सकहरूले प्रचण्ड गर्मीमा घुमफिर नगर्न, घामबाट फर्किएलगत्तै चिसो पेय पदार्थ सेवन नगर्न, पानी राम्ररी उमालेर मनतातो पारी सेवन गर्न र बढी मसालादार खानाको साटो फलपूmल सेवन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
चुनावी तापमानमा अचानक भएको वृद्धि
सञ्जय साह मित्र चुनावको मिति नजिकिंदै जाँदा चुनावी तापमान समाजमा बढेको छ । राजपा नेपाल औपचारिकरूपमा चुनावमा आउने भएपछि समाज चुनावतिर उन्मुख भएको हो । अहिले सबैतिर चुनावको चर्चा छ । बाढीको तनाव र बाढीले पु¥याएको क्षतिलाई चुनावको रन्कोले बिस्तारै छोप्दै गएको छ । एकातिर बाढीले निकै क्षति पु¥याएको छ भने अर्कोतिर चुनाव प्रचारको बाढी आएको छ । बाढीले पु¥याएको क्षतिको सम्पूर्ण विवरण नआउँदै समाजमा माहोल नै बदलिएको छ । राम्ररी हेर्ने हो भने एकपछि अर्को बाढीले समाजको आप्mनो पुरानो स्वाभाविक गतिलाई नै बगाएको देखिन्छ । चुनावको माहोल बन्दै गएको देखिएको छ । हिजो अलिकति पनि विश्वास नगर्ने अहिले आपूmलाई उम्मेदवारको रूपमा एकचोटि सामाजिक हैसियत र प्रतिष्ठाको आँखाले नियालिरहेको छ । बाढी आपूm गएपछि राहतको बाढी लिएर आयो । बाढीले चुनावलाई केही नजिक ल्याइदियो । कुन अर्थमा भने दलहरूले उम्मेदवार तय गर्नुअघि आपूmलाई उम्मेदवार भन्ठानेर बाढीपीडितलाई धेरैले धेरै किसिमका राहत बाँडे । राहत बाँड्नमा शुरूमा प्रतिस्पर्धा नै भयो । प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेका राहत बाँड्नेहरूले अरूको आलोचना शुरू गरे । आलोचना त कम
आचारसंहिता सबैको लागि
प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लामा अहिले स्थानीय निकायको चुनावको चटारो छ । वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा तोकिएको यो प्रदेशसमेतको चुनाव बारम्बार सर्दै तेस्रो चरणमा असोज २ गते तोकिएको छ । चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारहरूका साथै आचारसंहिता सरकार, सरकारी कर्मचारी, सुुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ सङ्गठनहरू, पर्यवेक्षक, सार्वजनिक पदधारण गरेका जुनसुकै व्यक्ति, सबै खाले सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मी, निजी र गैरसरकारी संस्था, सबैथरीका विश्वविद्यालय, विद्यालय र तिनमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीलगायतलाई आचारसंहिताले बाँध्ने काम गरेको छ । आगामी स्थानीय निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी, विश्वसनीयतवरबाट सञ्चालन गर्न, निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र मर्यादित पार्न, अनुचित प्रतिस्पर्धा र साधनस्रोतको दुरुपयोगलाई रोकी स्वतन्त्ररूपले प्रतिनिधि छनोटको आधार तय गर्नका लागि आचारसंहिता लागू गरिएको हो । जारी आचारसंहितामा थुप्रै कुराहरूको वर्णन छ । के के गर्न हुने र के के गर्न नहुने । स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता–२०७३ मा कुनै
२०७४ भदौ १४ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
निर्वाचनबारे पर्साका सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रशिक्षण, गलत समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह
प्रस, वीरगंज, १३ भदौ/ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, पर्सा र युएनडिपीको सहयोगमा मङ्गलवार निर्वाचन र सञ्चार प्रशिक्षण तथा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा पर्साका मुख्य निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीश विष्णु सुवेदी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सञ्चारमाध्यमको अहम् भूमिका रहने बताए । उनले निर्वाचनका समाचारहरू सत्यतथ्य आधारमा आप्mनो स्रोत र साधनबाट पाठकसमक्ष पस्केर जिम्मेवार पत्रकारको भूमिका निर्वाह गर्न सुझाए । गलत समाचारका कारण आमजनता भ्रममा पर्ने भएकोले सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्न उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेलले गलत समाचारका कारण सुरक्ष्Fा निकायको मनोबल खस्किने गरेकाले सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्न सुझाएका थिए । वर्षौंपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेकोमा यसलाई सभ्य तथा मर्यादित बनाउन सञ्चारकर्मीको भूमिका अपरिहार्य रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हुमनाथ पराजुली, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, पर्साका अध्यक्ष श्याम बन्जारा, प्रेस काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले मन्तव्य राखेका थिए
तमुचोक–भगवाननगर–दीपकनगर सडकको मर्मत
प्रस, ठोरी, १३ भदौ/ बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको ठोरी गाउँपालिका–१ को तमुचोक–घोल गाउँ भगवाननगर हुँदै दीपकनगरसम्मको सडकको मङ्गलवार मर्मत गरिएको छ । बाढीले सो सडकखण्डको विभिन्न भागमा ठूलो क्षति गरेपछि विगत १८ दिनदेखि एम्बुलेन्ससम्म गुड्न सकेको थिएन । स्थानीय युवाहरूको सक्रियतामा बाढीले बिगारेको सडकको मर्मत कार्य गरिएको स्थानीय युवा पुरन थापाले जानकारी दिए । बाढीले सो खण्डमा रहेका पुल तथा कल्भर्ट सबै बगाएको थियो भने सडकको भागमा खाल्डो र बगर बनाएको थियो । १८ दिनदेखि सो सडकखण्डमा गाडी गुड्न नसक्दा स्थानीय प्रभावित बनेका थिए । गाउँमा कोही बिरामी परे एम्बुलेन्स पनि आउने बाटो नभएकाले वडापालिकाको बजेटबाट पछि सोधभर्ना हुने गरी सडक मर्मत गरिएको उनले बताए । कुँवरटोलदेखि दीपकनगरको सडकखण्डको मर्मत गरिएको स्थानीय श्यामु सुवेदीले जानकारी दिए । तमुचोकदेखि दीपकनगरसम्मको सडक मर्मत भएसँगै त्यस क्षेत्रका स्थानीयमा खुसीयाली छाएको छ । गत साउन २८ गतेदेखि सो सडकखण्डमा बाढीले क्षति गरेपछि ठोरी–भरतपुर सडकखण्डसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको थियो ।
विद्यालयको अवस्था विश्लेषणमार्फत् शैक्षिक सुधार
भरत सहनी शिक्षामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकता दिंदै आएको छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउने, राम्रो शैक्षिक वातावरणको मदतबाट विद्यालयमा टिकाउने र गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट बिकाउने सामुदायिक विद्यालयको मुख्य लक्ष्य रहेको हुन्छ । यस लक्ष्यको परिपूर्तिमा विगतमा उल्लेखनीय योग्दान पु¥याइ समुदायबाट प्रशंसा बटुल्न सफल भएका सामुदायिक विद्यालयहरूले हाल गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा आप्mनो लोकप्रियता गुमाउँदै गएका छन् । सामुदायिक विद्यालयले शिक्षाको क्षेत्रमा नवीन अन्वेक्षण गर्न नसकेका कारण शैक्षिक स्तर घट्न गई निजी विद्यालयको आगमन भएको हो । एकातिर निजी विद्यालयले गुणस्तरीय तथा अङ्ग्रेजी शिक्षाको माध्यमबाट आप्mनो बजार विस्तार गर्न सफल भइरहेका छन् भने अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयहरू परम्परागत शिक्षण तौरतरिकाका कारण अलोकप्रिय बन्दै गई सीमित क्षेत्रमा खुम्चिनुपरेको अवस्था छ । सामुदायिक विद्यालयका प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहमा विद्यार्थीको चाप घट्न गई कतिपय विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । उच्च शिक्षाप्र
दण्डहीनताले प्रश्रय नपाओस्
नेपाल चिकित्सक सङ्घ नारायणी, वीरगंजका चिकित्सकहरू बुधवारदेखि आन्दोलनमा होमिदैछन् । सङ्घका कोषाध्यक्ष डा. सञ्जय अग्रवालमाथि भदौ १० गते बिहान एएमसी अस्पतालमा ड्युटीमा रहँदा कुटपिट गरिएको घटनालाई लिएर चिकित्सक सङ्घ आन्दोलित भएको हो । चिकित्सक कुटिएको घटना पर्साको सन्दर्भमा नौलो होइन । प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार तीन महिनामा दशवटा चिकित्सकमाथि हातपात तथा दुव्र्यवहारका घटना भइसकेको छ । चिकित्सक दोषी भएको घटनामा मिलापत्र गर्ने र चिकित्सक निर्दाेष भएको घटनामा आन्दोलन गर्ने चिकित्सक सङ्घको रवैयाले पनि डा. अग्रवालमाथि पछिल्लो चरणमा भएको घटनामा चिकित्सक निर्दोष भएको सङ्केत गरेको छ । घटनाको पृष्ठभूमि हेर्दा एएमसी अस्पतालमा वीरगंज महानगर–१५ निवासी सुवास झाकी पत्नी सुत्केरी हुन भर्ना भएकी थिइन् । उनले शिशु जन्माइन् । शिशु जन्माउनका लागि गाइनो डाक्टर पनि संयोगले डा. अग्रवालकी पत्नी डा. कृति अग्रवाल थिइन् । नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएपछि डा. सञ्जयले एनआइसियुमा भर्ना गराएका थिए । तर रात्रिकालीन अवस्थामा नियमित चेकजाँच गर्न डा. सञ्जय आपैंm ज्वरोको शिकार भएपछि सकेनन् तर उनले अस्पताल प्रशा
२०७४ भदौ १३ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालयको स्थापना, निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा
प्रस, वीरगंज, १२ भदौ/ स्थानीय तहको तेस्रो चरण अन्तर्गत प्रदेश नं. २ मा हुन लागेको निर्वाचन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोमवारदेखि सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरेर निर्वाचनको काम अगाडि बढाइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यलय पर्साले जनाएको छ । आगामी असोज २ गते प्रदेश नं. २ को ८ जिल्ला अन्तर्गत एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी १३६ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन लागेको हो । १३६ स्थानीय तह रहेको प्रदेश नं. २ मा एक हजार २ सय ७१ वडा रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख र अध्यक्षदेखि वडा तहसम्म गरी ६ हजार ६ सय २७ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । दुई नम्बर प्रदेशमा २६ लाख ६५ हजार ७९२ मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सोही क्रममा पर्सामा १ महानगरपालिका, ३ नगरपालिका तथा १० गाउँपालिकामा सोमवारदेखि निर्वाचन कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । आज पर्सा जिल्लाभरिमा सुरक्ष्Fासहित निर्वाचन अधिकृतहरू पुगी गाउँपालिकाको कार्यालयमा कार्यालय सञ्चालन गरेको स्थानीयहरूले जानकारी गराएका छन् । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार छिपहरमाई गाउँपालिकामा नगेन्द्ररा
पर्साको सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाको सेवा ठप्प
प्रस, वीरगंज, १२ भदौ/ नेपाल चिकित्सक सङ्घ नारायणी वीरगंजको सोमवार सम्पन्न बैठकले सङ्घका कोषाध्यक्ष डा. सञ्जय अग्रवालमाथि भएको हातपातको विरोधमा भदौ १४ गते बुधवारदेखि पर्सा जिल्लाको सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाको सेवा ठप्प गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घको कार्यालयमा अध्यक्ष डा. जगदीश अग्रवालको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले एएमसी अस्पतालमा ड्युटी गर्न जाँदा डा. अग्रवालमाथि भएको हातपातको विरोधमा स्थानीय प्रशासनलाई ज्ञापन दिएको तर सो सम्बन्धमा प्रशासन संवेदनशील नभएको ठहर गर्दै बुधवार बिहानैदेखि नाउक्षे अस्पतालको आकस्मिक कक्षबाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाको सेवा ठप्प गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घले भदौ १० गतेको घटनामा ११ गते ज्ञापन दिएको र भदौ १२ गतेदेखि गर्ने भनिएको आन्दोलन प्रहरी उपरीक्षक सुदीप गिरीको आग्रहमा १ दिनका लागि स्थगन गरेकोमा प्रहरी प्रशासनबाट दोषी पक्राउ गरी कानून अनुसारको कारबाई गर्नेतर्पm पहल नगरिएको कारण आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताएको छ । बैठकले बुधवार बिहान ८ बजेदेखि नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको आकस्मिक सेवाबाहेक सम्पूर्ण सेवा ठप्प गर्न सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थालाई
उम्मेदवार छनोटको विषयलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस पर्साभित्र किचलो
प्रस, वीरगंज, १२ भदौ/ वीरगंज महानगरपालिकाको उम्मेदवार छनोटको विषयलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस पर्साभित्र किचलो शुरू भएको छ । पार्टी नेतृत्वले वीरगंज महानगरको मेयरमा जिल्ला सभापति अजयकुमार द्विवेदीलाई चुनाव लडाउने निर्णय गरिसकेको भएपनि उपमेयरका उम्मेदवारको विषयलाई लिएर काङ्ग्रेसभित्र किचलो भएको हो । केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले प्रियङ्का केशरीलाई वीरगंज महानगरको उपमेयरमा चुनाव लडाउने अडान लिएपछि पार्टी सभापति एवं मेयरका उम्मेदवार द्विवेदीसहितका अधिकांश नेताहरूले विवाद जनाएका छन् । उपमेयरको लागि उत्तमा प्याकुरेल, शान्ति कार्की, रूपा श्रेष्ठलगायतका नाम चर्चामा रहेका बेला केन्द्रीय सदस्य रिजालले केशरीलाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अडान लिएपछि काङ्ग्रेसभित्र उम्मेदवार छनोटको विषयलाई लिएर विवाद भएको हो । नेता रिजालले अडान लिएको केशरी पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहेको भन्दै पर्सा काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले विरोध जनाएका हुन् । पार्टी नेतृत्वले उपमेयरमा केशरीलाई नै उम्मेदवार बनाएको खण्डमा पार्टी सभापति द्विवेदीले आपूm मेयरमा नलड्ने अडान लिएको काङ्ग्रेस स्रोतले जनाएको छ
संशोधन प्रस्ताव असफल भएपछिको मधेसको अवस्था
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव ०७२ असोज ३ मा जारी भएको वर्तमान संविधान उपर मधेसीहरूको चर्को विरोध रहेकै बखतमा ०७२ माघ १० गतेमा दलहरूको सहमतिमा दुईतिहाई बहुमत पु¥याई संविधानको दोस्रो संशोधन गरियो । संविधान जारी भएको ४ महिनामा नै संविधानको पहिलो संसोधन हुनुले संविधान निर्माताले संविधान बनाउने बेलामा कमजोरी गरेको प्रस्ट भयो । चार महिनाभित्र पहिलो संसोधन गरी बृहत् असहमतिलाई शान्त मात्र पारिएन संविधानले गतिशीलताको आधुनिक एवं उत्तम चरित्र बोकेको पनि पुष्टि भयो । उक्त संसोधनपछि संविधानको सर्वस्वीकार्यता लाागि उठेको मधेसको आवाज सम्बोधन हुने गरी दोस्रो संशोधन पनि होला भन्ने आम अपेक्षा थियो । ओली सरकारले मधेसको माग संशोधन गर्नैे नसक्ने अडान राखेको अवस्थामा त्यसैलाई अधार बनाई देउवा र प्रचण्डको गठबन्धन भयो र प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले तत्काल चालेको मधेसमैत्री कदमले मात्र होइन, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएकोबाट थोरै भए पनि मधेसमा केही राहतको किरण महसुस भयो । राजविराज घटनाको दोषीलाई तदारुकताका साथ कानुनी कार्यवाही गरिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, घाइते एवं मृतकलाई क्
हर्न बजाउने दण्डित
सरकारले राजधानी शहर र पोखरामा पहिलो चरणमा र चितवनको भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गतको चक्रपथ क्षेत्रलाई हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । भर्खरै हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा भएको भरतपुर महानगरपालिकामा पहिलो चरणमा हर्न नबजाउन परामर्श, सचेतना कार्यक्रम र पछिल्लो चरणमा जरिवाना गर्न थालिएको छ । हर्न निषेधित गर्नुको अर्थ जथाभावी असह्य ध्वनि नियन्त्रण गर्नु हो । सामान्य अवस्थामा मानिसले निर्धारित डेसिबलभन्दा बढी शोर सुन्यो भने तनाव उत्पन्न हुन्छ । चर्को ध्वनिले गर्दा मानिसको ज्यानसमेत जान सक्छ । पहिलेको जमानामा क्रूर शासकहरूले कसैलाई दण्डित गर्नुप¥यो भने ठूलो नगाडामा मानिसलाई थुनेर नगाडामा ठूलो आवाज हुनेगरी बजाउन लगाउँथे । यसले मानिसमा पागलपनसम्मको तनाव भएर आखिरमा प्राण त्याग जान्थ्यो । अचेल पनि हामीले देखे वा सुनेका छौं अति तीव्रगामी कन्कर्ड विमान कुनै शहरको नजिक उड्यो भने घरका शीशाका झ्यालहरू फुट्छन् । अचेल त यसै पनि चारैतिर शोर हुन्छ, त्यसमाथि सवारीसाधन, कलकारखाना, भजनकीर्तन, यज्ञहोमादिदेखि सामान्य पूजा गर्दा पनि चर्को स्वरमा लाउडस्पिकर बजाउने फेसन नै चलेको छ । ध्वनिको तरङ्ग एउटा स
२०७४ भदौ १२ गते सोमवारको प्रतीक दैनिक
पोखरिया नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ – शहरी विकासमन्त्री साह
प्रस, वीरगंज, ११ भदौ/ शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले पर्सा जिल्लालगायत देशभरिका योजनालाई तादरुकताका अगाडि बढाउन जोड दिएका छन् । केही दिन पहिले पर्सा आएका मन्त्री साहले विभिन्न योजनाको अनुगमनपश्चात् स्थानीयले दिएको जानकारी तथा काममा ढिलाइ हुनुको कारणबारे आज वीरगंजमा पत्रकार सम्मेलन अयोजना गरी खुलासा गरेका हुन् । पत्रकार समेल्लनमा बोल्दै मन्त्री साहले पर्सा लगायत देशभरिमा भवन विभागबाट हुने योजनाहरूबारे जानकारी गराउँदै कर्मचारीहरूबीच समन्व्यको कमी, ठेकेदारहरूको लापरवाही, सरकारको पुरानो नीतिको कारण योजनाहरू कम दरमा सकार गर्ने तथा स्थानीय बासिन्दाको अनावश्यक बिरोध रहेको बताए । योजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न मन्त्रालय तथा विभागको टाउको दुःखाइ बन्दै गएको बेला सो समस्या निराकणका लागि अहिले देशभरिबाट रायसुभाव सङ्कलन भइरहेको र प्राप्त निष्कष्र्मका आधारमा नीति निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा भवन विभागबाट पर्सामा सञ्चालित योजनाबारे शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद सिंहले जानकारी गराएका थिए । देशभरिको भवन विभाग अन्तर्गत भएको कामहरूको प्रगति विवरण प्
बाढीको कारण पर्सामा एक अर्बको क्षति
प्रस, वीरगंज, ११ भदौ/ तराईमा केही दिन पहिले आएको बाढीको कारण बालीनाली तथा सिंचाइका लागि बनाएको नहरमा १ अरव ५ करोढ बराबरको क्षति भएको समाचार प्राप्त भएको छ । जिल्ला कृषि कार्यालय पर्साले दिएको जानकारी अनुसार पर्सामा ३५ करोड बराबरको बालीनाली क्षति भएको छ । कृषि कार्यालयबाट गाउँपालिका स्तरीय टोलीले गरेको सर्वेक्षण तथा बाढी पीडितले दिएको निवेदनको अधारमा पूर्ण रूपले धान बाली १६ सय हेक्टर, तरकारी बाली ४० हेक्टर, माछा पोखरी ३५० हेक्टर नष्ट भएको जिल्ला कृषि कार्यालय, पर्साका प्रमुख वीरेन्द्र सिन्हाले जानकारी दिएका छन् । पर्साको एउटा महानगरपालिका, ३ नगरपालिका, १० गाउँपालिकामध्ये साबिक झौवागुठी, लहावरथकरी, पकहामैनपुर, सबैठवा, भेडीहारी, मिर्जापुर, धोबिनी, सम्भौता, भिस्वा, धोबिनी, जगरनाथपुरमा बालीनालीको बढी क्षति भएको सिन्हाले बताए । त्यसैगरी बाढीको कारण गण्डक नहरमा झन्डै रु ७० करोड बराबरको क्षति पुगेको सो कार्यालयले जनाएको छ । मूल नहर, सहायक नहर, ब्लक नहरमा गरी ७० करोड ४५ लाख ३३ हजार १ सय बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय बहुअरी वीरगंजले जन
उम्मेदवारी विषयमा राजपा नेपालको पर्सा, बारामा विवाद
प्रस, वीरगंज, ११ भदौ/ राजपा नेपाल, पर्सा र बारामा उम्मेदवारीको विषयलाई लिएर आकाङ्क्षीहरूबीच चर्को विवाद भइरहेको छ । वीरगंज महानगरको मेयरको लागि विमलप्रसाद श्रीवास्तव र राजेशमान सिंहका कार्यकर्ताबीच पर्यवेक्षक विजय गुप्ता राय सुझाव लिन आएको बेला रस्साकस्सी भएपछि आज पर्यवेक्षक समितिमा ६ जना सदस्य थप भएका छन् । गुप्ता मात्रको संयोजकत्वमा गठित उम्मेदवार छनोट समितिमा आजदेखि सहअध्यक्ष एवं सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महासचिव शिव पटेल, महम्मद कदम रसुल, केन्द्रीय सदस्यहरू पुरुषोत्तम झा, शम्भु चौरसिया र राजेश पटेल थपिएका छन् । अब यो समितिले वीरगंज महानगरको मेयर, उपमेयरलगायत वडाअध्यक्षहरूको चयन गर्नेछ । समितिका सदस्य पुरुषोत्तम झाले वीरगंज महानगरको मेयर, उपमेयरको उम्मेदवारको भदौ १३ गते मङ्गलवारसम्म घोषणा गर्ने गरी काम भइरहेको बताएका छन् । यता पोखरिया नगरपालिकाको मेयरका लागि राजपाको दुई स्थानमा भेला सम्पन्न भई तीनजनाको नाम सिफारिस भएको छ । पोखरियास्थित हनुमान मन्दिरमा सम्पन्न भेलाले निजामुद्दीन समानी र राजु साहको नाम सिफारिस गरेको छ भने सिंचाइ कार्यालयमा सम्पन्न भेलाले जोगानन्द चौहानलाई
खाँचो छ एउटा जागरुक र इमानदार शिक्षकको
अनन्तकुमार लाल दास शिक्षक भनेको विद्यार्थीलाई तोकिएको पाठ पढाइदिने मात्र नभई राष्ट्र निर्माणको एउटा प्रमुख प्रेरक तŒव पनि हो । शिक्षकको अर्थ नै सिकाउने व्यक्ति हो । सिकाउने व्यक्ति त्यो हुन्छ जो सिकेर दक्ष भइसकेको हुन्छ । यस कारण सिक्ने भन्दा ठूलो अर्थात् ‘गुरु’ हुन्छ । गुरु पद पाएर पनि यदि त्यस व्यवसायप्रति इमानदारिता भएन भने कसप्रति इमानदारिता हुन्छ ? तर वर्तमानमा शिक्षकहरूको सरसर्ती मूल्याङ्कन गर्दा लगभग नब्बे प्रतिशत यस्ता शिक्षकहरू भेटिन्छन् जो आप्mनो व्यवसायप्रति सन्तुष्ट नै छैन । इमानदारिताको प्रश्न त पर जाओस् उनीहरू हीनभावनाले ग्रसित भएको देखिन्छन् । जीवनभरि यस्ता शिक्षकहरूले आप्mनो भाग्यलाई दोष दिइरहेका हुन्छन् । उनीहरूले त्यस परिस्थितिलाई पनि दोष दिइरहेका हुन्छन् जसका कारण उनीहरूलाई शिक्षक बन्नुप¥यो । यसलाई सामाजिक व्यवस्थाको दुर्भाग्य नै भन्न सकिन्छ जहाँ शिक्षण व्यवसायप्रति त्यस्तो भावना छैन, जुन पहिले थियो । शिक्षण तल्लोस्तरको पेशा होइन । गुरुको काम कसरी लाजमर्दो हुन सक्छ ? कुनै पनि संस्कृतिमा गुरुको पद सदासर्वदा सर्वोच्च नै रहेको भेटिन्छ । महात्मा कबीरले त गुरुल
शासन नै नभएको मुलुकमा सुशासनको आश गर्नु हास्यास्पदजस्तो देखिन्छ । तर समयक्रममा मानिसमा ज्ञान, बुद्धि जाग्रत हुँदै जाँदा समाजले पनि यथोचित परिवर्तन अङ्गीकार गर्नुपर्छ । हामीले हेर्दाहेर्दै नेपाली समाजमा आमूल परिवर्तनहरू भएका छन् । केही विकासजन्य, जसले तत्कालका लागि विकृतिलाई निम्त्याएको छ भने, त्यसको निराकरणको लागि मानिसमा सचेतना जागेसँगै समाजले विवश भएर परम्परागत सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपरेको छ । हिजो शिक्षालाई साक्षरसम्म यथेष्ठ ठान्ने समाज आज सबैका लागि शिक्षा भन्ने चेतनासम्म पुगेको छ । शिक्षाको प्रसारसँगै केही बेथितिहरू जन्मेका छन्, जुन वास्तवमा बेथिति त होइन, तर समाजको रूढिवादी सोचले बेथिति बनाएको हो, विस्तारै हटदै गएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि चेतना जागरण भएसँगै अब जनस्तरमा रोगको उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने वातावरण बनाउने सोच विकसित भएको छ, जसलाई करबलले भए पनि समाज स्वीकार गर्न बाध्य भएको छ । सडकहरूको विस्तार भइरहेको छ, विभिन्न विधाका शिक्षालयहरूले उच्चतम शिक्ष्Fा दिइरहेका छन् । मानव जातिको लागि मूल समाज हो । समाजमा परिवर्तनको गतिलाई सरकारले तीव्रता दिने हो
२०७४ भदौ ११ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
रामथलीमा दुई दर्जन घर विस्थापित, ५ दर्जनभन्दा बढी घर जोखिममा
प्रस, निजगढ, १० भदौ/ आकाशमा कालो बादल मडारिन थाल्यो कि बाढीपीडित घरपरिवारलाई पिरलोमा पर्छन् । बारा निजगढ नगरपालिका रतनपुरीका रामथली, कोलगाँउ, चिसापानी, घैया खोरियाका बाढीपीडित स्थानीयहरूको सानै फुसफुसे आकाशे पानी देख्ने बित्तिकै होशहवास नै उड्न थाल्छ । रामथली, कोलगाँउ, चिसापानी, घैया खोरियाका गरी तीन दर्जनभन्दा बढी घरधुरी अहिलेसम्म पनि विद्यालय, आफन्त, छिमेकीका घर, गाईगोठहरूमा शरण लिएर बसिरहेका छन् । निजगढ नगरपालिका–१२ रामथलीका १३ घरपरिवार दुई सातादेखि स्थानीय मञ्जुश्री प्राथमिक विद्यालयमा बस्दै आएका छन् । उनीहरू विद्यालयमा बसेपछि विद्यालय सञ्चालन हुन सकेको छैन् । अधिकांशको चुल्हो कक्षा कोठाभित्रै छ । अन्य एक दर्जन घरपरिवार आफन्त र छिमेकीका घर, गोठमा बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई नजिकैको हिले खोल्सीले यस्तो विपत्मा पारिदिएको हो । खोल्सी सानो छ । तर विपत् भने ठूलो परेको छ । बस्तीदेखि चुरे बढीमा ७० देखि १ सय मिटर सिरानमा छ । सो खोल्सीको पानी नजिकै भएर बग्ने बुङ्गजोर खोलामा नबगी सीधै बस्तीतर्पm सोझिदै बगेपछि बस्तीका सबै घरपरिवारले मध्य रात घर छोड्नुपरेको पीडित ५२ वर्षीय जयबहादुर
चिकित्सक सङ्घका कोषाध्यक्ष डा. अग्रवालमाथि हातपात
प्रस, वीरगंज, १० भदौ/ नेपाल चिकित्सक सङ्घ पर्साका कोषाध्यक्ष डा. सञ्जय अग्रवालमाथि शनिवार एएमसी अस्पतालमा हातपात भएको छ । वीरगंज महानगर–१५ लक्ष्मनवाका सुभाष झा, बैजु झालगायत १०–१५ जनाको समूहले डा. अग्रवालमाथि हातपात गरेको थियो । आज बिहान ९ बजे भएको सो घटनापछि डा. अग्रवालले आपूmलाई गएराति १०४ डिग्री ज्वरो आएकोले अस्पताल आउन नसकेपछि सोको जानकारी अस्पताल प्रशासनलाई दिएको र बिहान ड्युटीमा आउँदा आपूmमाथि एक्कासि हातपात भएको बताए । शुरूमा उनले आपूmलाई हातपात गर्नुको कारण नबुझेको बताएका छन् । आपूm बालरोग विशेषज्ञ भएको र हातपात गर्नेहरूले सुत्केरी भएकी सुभाष झाकी पत्नीलाई समयमा औषधिसेवन नगराएको आरोपमा आपूmमाथि हातपात गरेको डा. अग्रवालले बताएका छन् । उनले झाकी पत्नीलाई पुत्रलाभ भएपछि नवजात शिशुको अवस्था कमजोर भएकोले एनआईसीयुमा भर्ना गरिएको र महिलालाई पनि एएमसीमैं भर्ना गरिएकोमा रात्रिकालीन ड्युटीमा रहेका नर्सले सुत्केरीलाई समयमा औषधिसेवन नगराएको भनी आपूmमाथि अनाहकमा हातपात भएको बताए । घटनामा संलग्न बैजु झालाई वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताले पक्राउ गरेको थियो । तर राजनीतिक दबाबक
ओमप्रकाश खनाल अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको व्यक्तित्व र शैलीलाई विरोधाभासको पुलिन्दा भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । पटकपटक आप्mनै रवैयाका कारण आलोचकको निशानामा पर्दै आएका देउवा एक व्यक्ति मात्र होइनन्, देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुका कारण उनको बोली, व्यवहार, आचरण र हाउभाउले विश्वसामु सिङ्गो नेपाल र नेपालीको गरिमा प्रभावित भइराखेको हुन्छ । यो हामीमा मात्र लागू हुने विषय पनि होइन, विश्व राजनीतिक आयाम र अभ्यासले स्थापित गरेको सत्य यही हो । त्यसैले औसत नेताले शब्द तौलिएर बोल्छ । कूटनीतिक चातुर्यले नेतृत्वको कुशलता प्रदर्शित हुन्छ । विडम्बना, सत्ता र शक्तिका निम्ति ‘त्वम् शरणम्’लाई मूलमन्त्र बनाएका हाम्रा राजनीतिक अगुवाले कुन ठाउँको महŒव के हो ? के बोल्नु हुन्छ र हुँदैन ? भन्ने हेक्का राख्नसमेत आवश्यक ठान्दैनन्/जान्दैनन् । र, उपहासको पात्र मात्र बन्दैनन्, देशवासीलाई नै लज्जित तुल्याउँछन् । शेरबहादुर देउवा मौजुदा रमिताको प्रमुख पात्र मात्रै हुन् । ओज तलमाथि भएपनि औसत राजनीतिक नेतृत्वको आचरण उस्तै हो । केही पहेली बाहिर आउँछन्, कतिका कर्तुत गुपचुप रहस्यमैं रहन्छन्, फरक यति हो ।
परमात्मासँग हाम्रो नित्य सम्बन्ध
हाम्रो सम्बन्ध दुई प्रकारका हुन्छन्– लौकिक र अलौकिक । लौकिक सम्बन्ध त्यो हो, जुन हाम्रो परिवार र संसारसँग जोडिएका हुन्छन् र अलौकिक सम्बन्ध केवल ईश्वरसँग मात्र हुन्छ । जहाँ हाम्रFे सबै लौकिक सम्बन्ध अस्थायी र अनित्य हुन्छ, भने त्यहीं अलौकिक सम्बन्ध स्थायी र नित्य हुन्छ । जबसम्म सबै प्रकारका सुख एवं सुविधा हामीलाई प्राप्त छ, हामीसँग धनसम्पत्ति छ, मानसम्मान छ, हाम्रFे सम्बन्धबाट व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति हुन्छ, तबसम्म हामीसँग सम्बन्ध राख्नेहरूको कमी हुँदैन । मानिसले हाम्रFे सम्बन्धको हवाला दिएर गौरवको अनुभव मात्र गर्दैन वरन् त्यसबाट लाभ उठाउने प्रयास पनि गर्छ, तर स्थिति जब यसको विपरीत हुन्छ अर्थात् आपत्विपत्ले हामीलाई चारैतिरबाट घेर्न थाल्छ, हाम्रो वैभव नष्ट हुन्छ, पाइला–पाइलामा हाम्रो अपमान र तिरस्कार हुन्छ, हाम्रो सम्बन्धको माध्यमबाट काम बन्नुको सट्टा हाम्रो सम्पर्कमा आउनाले मिथ्या कलङ्क लाग्ने सम्भावना हुन थाल्छ, तब अधिकांश व्यक्तिले हामीसँग सम्बन्ध तोड्छन् । कुनै बेला हामीसँग सम्बन्ध थियो, यो प्रकट हुनमा पनि लज्जाको अनुभव गर्छ र सम्बन्ध लुकाउने चेष्टा गर्छ । महापुरुषको कथन छ कि
२०७४ भदौ १० गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
महानगर प्रमुख पदको उम्मेदवारी छनोट विषयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पर्साका कार्यकर्ताहरूबीच झडप
प्रस, वीरगंज, ९ भदौ/ वीरगंज महानगरपालिकाको प्रमुख पदको उम्मेदवारी छनोटको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पर्साका कार्यकर्ताहरूबीच शुक्रवार वीरगंजमा झडप भएको छ । झडपमा परी विमल श्रीवास्तव समूहका श्यामबाबू चौरसिया सामान्य घाइते भएका छन् । प्रहरीको बाक्लो उपस्थितिको कारण सो बेला कुनै अप्रिय घटना नभएको वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताका प्रहरी निरीक्षक अनिश कर्णले बताए । मेयर पदका आकाङ्क्षी उम्मेदवारको रूपमा रहेका विमल श्रीवास्तव र राजेशमान सिंहका कार्यकर्ताबीच झडप भएको हो । उम्मेदवार छनोट तथा स्थानीय तहको चुनावी रणनीति बनाउने उद्देश्यले राजपाले होटेल कुमु प्यालेसमा बैठकको आयोजना गरेको थियो । बैठकमा श्रीवास्तव र सिंह समूहले आआप्mनो शक्ति प्रदर्शन गर्न थालेपछि बैठक तत्काल स्थगित भएको र पछि पुनः बैठक भएको बुझिएको छ । राजपा नेपालले पर्सा जिल्लामा उम्मेदवार छनोटको लागि केन्द्रीय पर्यवेक्षक विजय गुप्तालाई वीरगंज पठाएको छ । राजपाबाट वीरगंज महानगरको प्रमुख पदको आकाङ्क्षी उम्मेदवारहरू विमल श्रीवास्तव र राजेशमान सिंहका कार्यकर्ताहरू बाजागाजासहित नगरपरिक्रमा ग
एमडीको छात्रवृत्तिको लागि ठगी गर्ने जवाद पक्राउ
प्रस, वीरगंज, ९ भदौ/ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पर्सा प्रहरीको सहयोगमा चिकित्साशास्त्रको एमडी अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिमा मिलाइदिन्छु भन्दै लाखौं ठगी गर्ने एकजना युवकलाई वीरगंजबाट पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा वीरगंज, मुर्लीका ४५ वर्षीय जवाद अन्सारी रहेका छन् । उनले तनहुँ घर भई काठमाडौं बस्दै आएका श्रेष्ठ थरका एकजना एमडीका विद्यार्थीसँग छात्रवृत्तिको लागि मोटो रकम ठगी गरेको आरोप छ । सिआइबीमा उजुरी गर्ने विद्यार्थी स्वयम् सिआईबीको टोलीसँगै वीरगंज आएर पानीट्याङ्कीबाट दिउँसो सवा २ बजे जवादलाई हिरासतमा लिन सहयोग गरेका थिए । पर्साका प्रहरी उपरीक्षक सुदीप गिरीले ठगी मुद्दामा जवाद पक्राउ परेको पुष्टि गरेका छन् । प्रहरीको अनुसन्धानमा जवादका बुबा पूर्वराजदूत हुन् । जवादका बुबा वीरगंज, श्रीपुरका हामिद अन्सारी हुन् । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार पक्राउ परेका जवादका बुबा हामिदले साउदी अरबको राजदूत छँदा त्यहाँ मरेका नेपालीहरूको नाउँमा निकासा भएको बिमाको रकम हिनामिना गरेको कसूरमा अख्तियारले दोषीसमेत ठह¥याएको थियो ।
उमाशङ्कर द्विवेदी अनि उनले अनेकौं प्रकारका उत्तम र गुणयुक्त भोज्य र पेय पदार्थ प्रदान गरे । ती पदार्थहरूबाट श्रीकृष्णले पहिले ब्राह्मणहरूलाइ तृप्त पारेर आप्mना अनुयायीहरूका साथ बसेर स्वयंले भोजन गरे । भोजनपछि रात्रि विश्राम गर्ने बेला विदुरजीले उनीसित भने–केशव, तपाईं यहाँ पाल्नुभयो, यो विचार असल छैन । मन्दमति दुर्योधनले धर्म र अर्थ दुवै त्याग गरिसकेको छ । उ क्रोधी तथा गुरुजनको अवज्ञा गर्ने खालको छ । धर्मशास्त्रको त उसको सामु कुनै महŒव नै छैन । आप्mनै ढिपी राख्दछ । उसलाई कुनै सन्मार्गमा लग्नु असम्भव नै छ । ऊ विषयहरूको कीरो, आपूmलाई बडो बुद्धिमान मान्ने, मित्रहरूसित द्रोह गर्ने, जम्मैलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने, कृतघ्न र बुद्धिहीन हो । यस बाहेक पनि उसमा अनेकौं दोषहरू छन् । तपाईंले उसको हितको कुरा गर्दा पनि ऊ मान्नेछैन । भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा र जयद्रथको बलले यस राज्यलाई स्वयं हडप्न चाहन्छ । यस कारण ऊ सन्धि गर्न चाहँदैचाहँदैन । उसलाइ त के पनि विश्वास छ भने एक्लै कर्णले नै उसका सम्पूर्ण शत्रुलाई जितिहाल्छ । त्यसैकारण उसले सन्धि गर्नेछैन । तपाईंले त सन्धि गर्ने प्रयत्न गर